Fiat Concept Centoventi waxaa lagu soo qaatay CES 2020! | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAmerica1 AmericaFiat Concept Centoventi waxaa lagu soo qaatay CES 2020!
10 / 01 / 2020 1 America, America, DUNIDA, SAWIRADA, GUUD, WADADA, Headline, baabuurta
Bandhigga Macaamiisha Elektaroonigga ah - CES 2020, Fiat wuxuu soo bandhigay fikradda korantada casriga ah Fiat Concept Centoventi. Gaariga fikradda ah “Centoventi gören, oo soo jiidatay dareenka weyn ee CES 2020, oo ah carwada ugu weyn adduunka ee macaamiisha elektaroniga ah ee lagu qabtay Las Vegas, wuxuu isku diyaarinayaa inuu si gaar ah u bixiyo baahiyaha dhaqdhaqaaqa korantada. Fikradda Centoventi, oo loo sameeyay si gaar ah Sannadkii 120-aad ee Fiat oo markii ugu horreysay lagu muujiyey 89-ka Geneva Motor Show, wuxuu matalaa meeshii ugu dambeysay taariikhda astaanteeda oo qaab-dhismeedkeeda qaab dhismeedka iyo deegaanka.
Fiat waxay ku soo bandhigtay Concept Centoventi Bandhigga Korantada Macaamiisha - CES 2020 magaalada Las Vegas, USA. Centoventi, the Red Dot naqshadeynta abaalmarinta ku guuleysiga ee Fiat Chrysler Automobiles (FCA), oo iskudarta tikniyoolajiyadda gawaarida korantada iyo xalalka la beddeli karo, ayaa ka tarjumeysa aragtida sumcadda gaadiidka korantada; Waxay soo jiidatay soo jiidashada booqdayaasha iyada oo leh qaab dhismeedkeedii casriga ahaa iyo astaamo teknolojiyadeed. Fikradda, oo magaceeda ka qaadata erayga Centoventi, oo macnaheedu yahay yüz boqol labaatan labaatan ada af Talyaani, waxay isu diyaarineysaa inay bixiso khibrad aan xadidneyn oo ku saabsan shaqsiyad ahaanta, waxayna xambaarsantahay aqoonta iyo waaya-aragnimada astaanta laga soo bilaabo 120 sano ee la soo dhaafay ilaa mustaqbalka.
“Centoventi“ Samaynta ”ayaa beddeli doonta ereyga”
Bandhiggiisa CES 2020, Fiat Concept Centoventi, oo lagu muujiyey markii ugu horreysay suuqa Waqooyiga Ameerika, ayaa loo soo saari doonaa qaab si buuxda loogu habeyn karo dhadhanka iyo baahiyaha isticmaalaha iyada oo aan wax caqabado ah la soo koobi karin. Si loo fududeeyo habka wax soo saarka, gaariga waxaa loo qorsheeyay in lagu soo saaro hal nooc oo keliya iyo hal midab. Adigoo adeegsanaya barnaamijka '4U', adeegsadaha dhamaadka wuxuu shaqsiyeyn karaa gaariga oo leh 4 nooc oo saqaf oo kaladuwan ah, 4 bambo oo kaladuwan, 4 roogyo kaladuwan iyo 4 xulasho oo dusha sare ah. Gawaarida sida aaladaha casriga ah; Iyada oo midabheeda bannaanka ah, naqshadda dhismaha ee gudaha ah, laga saari karo iyo qaab-dhismeedka saqafka lagu daro, nidaamka infotainment-ka ayaa gabi ahaanba si gaar ah loo qaabeysan karaa. Fiat Centoventi uma baahna inay sugto cusbooneysiinta sida nooca cusub, taxanaha gaarka ah ama qurxiyo. Haddii la codsado, adeegsaduhu wuxuu cusbooneysiin karaa gaarigiisa waqti kasta isagoo sameynaya isbedelka la doonayo. Fiat Centoventi baaxaddiisu waa mid dhexdhexaad ah. Thanks to naqshadda dhismaha baytariga cusub, xaddiga gaariga wuxuu u dhexeeyaa 100 ilaa 500 kiiloomitir iyadoo kuxiran loogu talagay in loogu talagay.
Tafaasiisha shakhsi ahaaneed ee Kişisel ”
Fikradda Centoventi waxay keenaysaa waji cusub oo adduunka gawaarida ah, taas oo ku jirta xilliga kala guurka ee xalka korantada, sida sannadihii 500-naadkii, markii Fiat uu hoggaaminayay kacaan warshadeed iyo dhaqan oo leh 1950 oo hannaan ah, oo leh astaamo naqshadeed kacaan. Waxaa loo beddelay aalad casri ah oo warbaahinta bulshada lagu baaro oo lagu dhejiyay daboolka waxayna calaamad u tahay guul kale oo waaxda baabuurta. Iyada oo lagu naqshadeeyay wadaagista baabuurta iyo qaababka cusub ee gaadiidka ee maskaxda maskaxda lagu hayo, fikradda ayaa ku muujineysa shaashad shaashadda isugeynta wejiga hore ee hore. Bandhigu wuxuu ka turjumi karaa farriimaha sida 'buuxa, faaruq ama baabuur dhigashada la bixiyo'. Intaa waxaa u dheer, shaashad ballaaran oo ku saabsan barta 'tailgate' ayaa u oggolaaneysa isticmaaleha inuu farriintiisa la wadaago dunida ka baxsan. In kasta oo gaadhigu dhaqaajinayo, kaliya calaamada Fiat ayaa la muujiyaa, laakiin markii ay joogsato, dareewalku wuxuu isu beddeli karaa habka “messenger” si uu u abuuro farriin cusub.
Concept Concept Inc.
Mashruucyada Tababarka Xirfadaha Ardayda ee Beykoz Logistics ee lagu soo bandhigay Suuqa Tababarka
Tiknolojiyada tareenada ee ASELSAN ayaa lagu soo bandhigay Berlin
Smart City Technologies oo lagu soo bandhigay Fair Fair ICSG
Prototype ah Gawaarida Guriga oo La Soo Bandhigay Markii Ugu Horaysay
MT 55000 nooca Fiat Mototreni tamarta iibka hadda
Nooc 5700 Fiat Mototren (Sawir Sawir)
Ogeysiiska Qandaraaska: Qodobka Engineka ee Iveco Makiinadaha loo Qaadanayo Qaybaha Fiat
Renault Group oo Qiimeeysay Gawaarida Fiat-Chrysler
Kayseri si ay ula kulmaan tareenka xawaaraha sare ee xNUMX
Sabiha Gökçen Kurtköy Subway wuxuu furan yahay 2020
Manisa Ankara Xawaaraha Xawaaraha Sare waa la furi doonaa 2020
Bandhig elektiroonig ah oo Macaamiil